I-Asus TUF Dash F15, amandla kanye nokuklanywa kungahambisana | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | 25/07/2021 13:00 | General, Amakhompyutha, AmaLaptops, Izibuyekezo
Amakhompiyutha wedeskithophu aya ngokuya engekho emadeskithophu, empeleni, ngisho nabadlali bamageyimu abaningi, izithameli eziyinhloko zalolu hlobo lwekhompyutha, bathuthela kufomethi ephathekayo eminyakeni yamuva ngenxa yemiklamo emisha nezici ezinamandla abazinikezayo.
I-Asus Dash F15, ilaptop yokudlala enezici ezivelele nedizayini eyenza ukuthi isebenziseke ngokweqile, ifika etafuleni lokuhlola. Sizohlaziya ngokujulile le laptop edumile okungenzeka uze kuyo ngenxa yezici kodwa ozogcina uyithengela idizayini, ungaphuthelwa yiyo.
Njengakwezinye izikhathi eziningi, i- ukubuyekeza ividiyo ephelele phezulu izokubonisa ifayela le- Unboxing nezici zayo eziyinhloko zokwakhiwa. Ungakhohlwa ukubhalisela i- isiteshi sethu se-YouTube ukuze siqhubeke nokuletha lokhu okuqukethwe okuthakazelisayo. Uma uyithandile, ungayithenga ku-Amazon ngentengo engcono kakhulu.
1 Izinto zokwakha nokuklama: Ubuhle ngaphandle konya
2 I-Hardware ne-GPU zisithembisa ikusasa
3 Ukuxhumana kwazo zonke izinhlobo
4 Ukuhlolwa nokupholisa
5 I-Multimedia nesipiliyoni esijwayelekile
Izinto zokwakha nokuklama: Ubuhle ngaphandle konya
Uma kunokuthile okungenza ngingakhululeki ngamakhompyutha wokudlala, yimigqa yabo enolaka, imibala yabo egqamile nobukhulu babo obedlulele. U-Asus kule TUF Dash F15 uthatha konke lokho akupholishe, njengamadayimane. Sinecomputer enephrofayli engu-19,9 millimeter, eyenziwe nge-hybrid yensimbi nama-plastiki ahlangabezana namazinga ezempi e-MIL-STD ukuqina kuyisici esibalulekile ngokujwayelekile kuyo yonke imikhiqizo ye-ASUS futhi kulokhu bekungeke kube kuncane.
Sinokutholakala kwemibala emibili, i- I-Moonlight White ne-Eclipse Grey (okumpunga okumhlophe nokumnyama). Engxenyeni engenhla sine-initials TUF ne-logo entsha yomkhiqizo. Sihlaziye imodeli ngokumpunga okumnyama ngakho-ke sizogxila kuyo. Kuzo zombili izinhlangothi sinamachweba wokuxhuma esizokhuluma ngawo ngokuhamba kwesikhathi. Ifreyimu yokubonisa, yize incane impela, ine-burr engezansi ebonakalayo. Isisindo esiphelele esingu-2 kg, ngaphandle kokuba yi-panacea, silula kulokho umkhakha okuhlinzekayo.
I-Hardware ne-GPU zisithembisa ikusasa
Ngokusobala sizoqala ngento ebaluleke kakhulu, itafula lezincazelo lapho sigqamisa iprosesa khona I-Intel Core i7-11 370H 3,3 GHz, ama-cores ama-4 (Isilondolozi esingu-12M, kufika ku-4,8 GHz). Ukuyihambisa, sine-Windows 10 Ikhaya elifakwe kuqala elinokubuyekezwa kwamahhala kwe-Windows 11. Kungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela, le modeli ihambisana ne- imodyuli yememori eyi-8GB 4MHz DDR3200, ngomthamo omkhulu ongalungiseka ofike kuma-32 GB we-RAM.
Iprosesa: I-Intel Core i7-11 370H 3,3 GHz, ama-cores ama-4
I-RAM: 16GB DDR4 3200MHz
I-SSD: I-512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0
I-GPU: IGeForce RTX 3070 NVIDIA
Ukugcinwa kweyunithi ehlolwe yi-512 GB ye-M.2 NVMe PCIe memory ye-SSD SSD enikeza isivinini esivivinyweni sethu se- Kufundwa ama-3400 MB / s nokubhala okungama-2300 MB / s, ngaphezulu kokwanele ukuhambisa imidlalo ye-OS neyevidiyo. Singakwazi, yebo, ukukhetha iyunithi efanayo ngomthamo we-1 TB.
Manje sigxila kokubalulekile, i- I-NVIDIA GeForce RTX 3070 ezophatha isigaba sokuqhafaza futhi enikeze ezinhlotsheni zayo «i-laptop» ukusebenza eGeekbenck yamaphoyinti ayi-121069, eduze kakhulu kwenguqulo yedeskithophu yeNVIDIA GeForce RTX3070.
Ukuxhumana kwazo zonke izinhlobo
Siqala ngokuxhumeka ngokomzimba, Ngasohlangothini lwesobunxele sinechweba lamandla okuphathelene, isibuko esigcwele seGigabit RJC45, i-HDMI 2.0b, i-USB 3.2 kanye ne-USB-C Thunderbolt 4 - Power Deilvery ephelezelwa yiJack 3,5mm. Ngasohlangothini lwesokunene sine-USB 3.2 ejwayelekile kanye ne-Kensington keychain.
3x i-USB 3.2
I-USB-C Thunderbolt 4 PD
3,5 mm umgodi
Ngokusobala, uma isigaba esinentambo siphelele, ngalokho I-USB-C iyahambisana nabaqaphi be-4K ku-60Hz futhi inemithwalo efinyelela ku-100W kwesigaba esingenantambo akunakuba kuncane. Sine I-Bluetooth 5.0 ne-WiFi 6, Lesi sigaba sokugcina ezivivinyweni zethu sikhiqize umuzwa ophikisanayo namanethiwekhi we-5 GHz lapho uhla lukhawulelwe kakhulu futhi i-ping ingahle ingabi njengoba ifunwa, sincoma ukusebenzisa ikhebula naphezu kokuhambisana okuphezulu.
Ikhompiyutha inabalandeli abane, ama-blade angama-83 lilinye, kanye nohlelo olupholile lokulwa nothuli. Amapayipi amahlanu okushisa esewonke wedivayisi yonke futhi umphumela kwaba yilokho umuntu abengakulindela kukhompyutha yalolu hlobo phakathi nehlobo, kushisa, kushisa kakhulu. Kodwa-ke, asikatholi imiphumela ecasulayo noma eyihlukanisa kakhulu nomncintiswano, ngakho ukupholisa kubonakala kwanele.
Thenga i-Asus TUF Dash F15 ku-Amazon
Ekuvivinyweni kwethu, ukusebenza kwekhompyutha KumaCities Skylines, iCall of Duty Warzone ne-CS GO sibe namazinga aphezulu kakhulu e-FPS, ngaphandle kwezinkinga zokusebenza noma ukushisa. Ngezizathu ezisobala, ilaptop izokwazi ukusingatha iningi lekhathalogi yakho ezimeni zokubuka ezihamba phambili.
I-Multimedia nesipiliyoni esijwayelekile
Ngeke sihambe ngaphandle kokukhuluma ngesikrini, sinephaneli engu-15,6-intshi ngo-16: 9 ratio, Ngiyayithanda indlela elapha ngayo i-anti-glare futhi iyakwazi ukubonisa i-100 ye-spectrum ye-sRGB, ngezinga lokuvuselela i-120 Hz engeyimbi ngephaneli le-IPS. Vele, ukukhanya kungathuthukiswa, yize singafinyelelanga imininingwane ngqo maqondana nokukhanya kwayo nge-cd / m2 ngayinye. Umsindo ucacile futhi unamandla anele ukujabulela okuqukethwe kwe-multimedia, enendawo enhle ngokujwayelekile.
Ikhibhodi inokuhamba okuhle, okufana nesitayela "sokudlala" okuningi kakhulu. Sinokuphrinta kwesikrini nama-RGB e-LED kuyo yonke indawo, nge-offset ephelele ye-1,7mm. Ithule, into eyaziswa, futhi iphendula kahle. Asikwazi ukusho okufanayo nge-trackpad, kubonakala kuncane futhi kungacacile, kepha akuyona inkinga ngale khompyutha, kepha cishe ngakho konke lokho i-Apple engakwenzi. Asinalutho lokukhuluma ngokuzimela, kuzoncika kakhulu ekufuneni kokudlala, ngaphezu kwamahora amabili kuphela, sincoma ukuthi uyisebenzise ixhumekile.
Le laptop ingxenye ye-1.299 yenguqulo yayo yokungena, efinyelela kuma-euro ayizigidi ezingama-1.699 yenguqulo esiyihlolile, enye indlela ethakazelisa kakhulu kumadivayisi esinawo emakethe ngenxa yokwakheka kwawo namakhono.
I-TUF Dash F15
Kuthunyelwe ku: 25 de julio de 2021
Ukulungiswa kokugcina: 25 de julio de 2021
Idizayini entsha nezinto zokwakha eziqediwe
Izingxenyekazi zekhompuyutha ezisesikhathini nekusasa elithembisayo
Imizwa emihle yokusetshenziswa nokuxhuma
Kufaka i-adaptha ye-A / C esikhundleni se-USB-C
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Asus TUF Dash F15, amandla kanye nokuklanywa kungahambisana
I-Amazon ivuselela isilawuli sezwi se-Alexa futhi sayivivinya